Waa Sidee Axwaasha Siyaasadda Jubba Land? Muxuu Ahaan Jiray Madaxweynaha Maamulka Ku Guulaystay? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — August 15, 2015
Waxaa maalmihii horre inta aan la gaarin doorashada maamulka Jubbaland soo baxaayay dul duleelo ku salaysaneed in awood la isticmaalay, awoodaas oo ah in Itoobiya ay xer-xertay dad badan oo asal ahaan ka soo jeedo Jubbooyinkaas. Sawabta loo xer-xeray dadkaas wax kalle ma ahan waa aragtiyo ku salaysan, aragtiyo siyaasadeed. Maanta oo ay tahay Agoosto 15, 2015: Baarlamaanka Jubbaland ayaa si aqlabiyad leh ku doortay Axmed Madoobe in uu noqdo Madaxweynaha Jubbland 4-ta sano ee soo socota. Waxayna doorashadaas u dhacday sidda tan:
Maxamed Cusmaan Yuusuf : 0
Cusmaan Xaaji Feyruus : 2
Hilowle Maxamed Aadan : 2
Axmed Maxamed Islaam : 68 Cod
2 cod ayaa xumaatay, 74 xildhibaan ayaa codeysey.
Waxaa isweydiin mudan tallow maxaa ka soo bixi kara xaaladda siyaasadeed ee hadda ka jira maamulka Jubba Land? Marwalbo aad ayay u wanaagsantahay inaan ka shaqeyno danaha guud ee dadkeena iyo dalkeena. Soomaaliya waxay mudo ku dhawaad 24 sano ku jirtay dhibaatooyin badan oo dhalisay gaajo, rafaad, dhimasho, tahriib iyo isqab-qabsi siyaasadeed. Waxaan ka wada marqaati nahay in qaabka siyaasadda Jubba Land ay ahayn qaab ku salaysan in wax la iska maqlo. Cidwalbo oo madax ah waxay ku dhaarataa kitaabka quraanka kariim ah. Kitaabkaas waa kitaab xag Alle ka soo degay loona baahanyahay in lagu wada dhaqmo, waana xalka aadanaha. Loolanka siyaasadeed ee maamulada Soomaaliya ayaa waxaad u moodaa inuu sii xumaanayo, maamulada qaar aad ayay u taageertay dowladda Federalka Soomaaliya balse hadana ma noqonin maamulada qaar kuwa ka shaqeeyo danaha guud ee bulsha weynta Soomaaliyeed. Qofwalbo wuxuu dareemi karaa in nabadda iyo horumarka aysan ahayn wax halmar la wada qabani karo. Dowlad 24 sano ku dhawaad bur-bur iyo qaxootinimo ku jiray lagama yaabo inay halmar nabad iyo horumar wada helaan.
Muxuu Ahaan Jiray Madaxweynaha Maamulka Ku Guulaystay?
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoowe) waxaa uu ku soo caan baxay Xiligii Maxaakiimta Islaamiga 2005/2006-dii, Madoobe waxaa uu ahaa Gudoomiyaha Maamulka Gobolada Jubbooyinka, waxaa sidoo kalle la shaqeyn jiray afhayeenka maxkamadaha Jubbooyinka Sheekh Ibraahin Shukri iyo Sheekh Ismaaciil Caraale. Markii maxaakiimtii laga saaray Kismaayo, Waxaa uu saldhig ka dhigtay xadka Soomaaliya iyo Kenya, isagoo halkaas la joogay garab hubeysan oo lagu magacaabi jiray Raas Kambooni, Axmed waxaa uu ahaa gaddoomiyaha Raas Kambooni, kooxdan ayaa qeyb ka ahaa ururka Xibsul Islaam.
Axmed Madoobe, waxaa uu dagaal kulla jiray xilligaas dowladaha Soomaaliya, Itoobiya, Kenya iyo Xitaa Mareykanka, mid ka mid ah dagaalladaas ayuu ku dhaawacmay kadibna waxaa lagu daweeyay dalka Itoobiya. Axmed Madoobe waxaa uu sidoo kalle la dagaallay Al-shabaab, Sheekh Xassan Turki oo ay xulufo sokeeyo ahaayeen waxaa uu taageeray Al-shabaab balse Madoobe ciidamadiisa ayuu kalla baxay Kismaayo, isagoo dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah la galay Al-shabaab. Intii uu socday dagaal-ka Madoobe iyo Al-shabaab, waxba isuma reeban labada dhinac, Al-shabaab waxaa ay ku eedeysay Madoobe in uu Itoobiya garab ka helo, Xisbigii uu ka tirsanaa Madoobe ee Xisbul Islaam waxay ku biireen Al-shabaab, Axmed waxaa uu xulafo la noqday Ahlu-sunna iyo dowladda Soomaaliya.
Muddo markii uu socday dagaalka Madoobe iyo Al-shabaab, waxaa dagaalka soo gashay Kenya iyo Gen. Gaandi oo bishii April 2011 isaga iyo ciidamo uu hogaaminaayo oo garab weyn ka helay Militariga Kenya ay Kismaayo ka qabsadeen Al-Shabaab, kadib dagaal muddo dheer qaatay oo laga soo waday Badda iyo Barriga, Gandi ayaa horkacayey maamul loogu magac daray AZANIA, oo ka talinayey Jubbooyinka 2011-dii ilaa 2013-kii. Axmed Modoobe, waxaa uu meesha ka saaray AZANIA isagoo dhisay Jubbaland, Maamulka hadda loo yaqaano Jubaland waxaa la dhisay 15-may 2013, kadib 500 oo ergo ah isugu yimaadeen magaalo madaxda Jubada Hoose ee Kismaayo, iyagoo u doortay Axmed Madoobe inuu noqdo Madaxweynaha maamulka Jubbaland.
Madoobe waxaa uu aqoonsi ka helay dowladda Federaalka ee Soomaaliy, Bishii Augusto 2013-ka Dowladda iyo Maamulka Jubaland ee Madoobe ayaa heshiis ku gaaray magaalada Adis Ababa, Waxaa labada wafdi kala hogaaminayey Madoobe oo Jubaland ah iyo Faarax Sheekh C/qadir oo wakiil ka ahaa Dowladda Xasan Sheekh. Axmed Madoobe Waxaa uu siyaasad uga adkaaday Barre Hiiraale, Barre waxaa uu Kismaayo kalla wareegay Gen. Moorgan bishii June, 1999, Maxaakiimtii ayaa ka qabsaday kadib dib ayuu u qabsaday, lakiin qisadaas waxaa soo afjaray Sheekh Axmed oo Barre iyo Ciidankiisa dibadda uga saaray magaalada waxyar kadib doorashadiisii, ugu dambeyntii Barre Hiiraale waxaa uu ku qancay heshiis ay dowladda soo bandhingtay kana shaqeeyay Faarax Sheekh August 29, 2014, Labo maalin kadib heshiiskaas Barre waxaa uu yimid Xamar, illaa iyo hadda juuq lagama maqal!
Modoobe bishii March 9, 2015, waxaa uu Kismaayo ka furay Shir lagu sameynaayo baarlamaan ay yeelato Jubbaland iyadoo May 7, 2015 Madaxweynaha, wasiirka arimaha dibadda Kenya, Wasiirka arimaha dibadda Itoobiya, Wakiilka IGAD ee Soomaaliya, Wakiilo ka socda Qaramada Midoobey ayaa ka qeyb galay xafladda Caleemo saarka Gudoonka Baarlamaanka ee Jubbaland, Baarlamaanka Federaalka oo xitaa sharci darro ku tilmaamay dheg jalaq uma siin Madoobe!! Axmed Madoobe, Waxaa uu gobolka kusoo xiray dowlado iyo dad muhiim ah sida Dowladaha Itoobiya iyo Kenya, Maamulka Cabdiwali Gaas, danjire Nicholas Kay, Maxamed Cabdi Afeey, bankiga Islaamka, Dowladdda Imaaraadka iyo dowladda Federaalka oo Madaxweynaha, Wasiirka Koobaad, Wasiirada, Xildhibaanada iyo xitaa Ciidanka ay u noqotay goob ay jecel yihiin tagisteeda!. Madoobe, waxaa uu saaxiib siyaasadeed la sameystay Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas iyagoo isku aragto ka noqday aringa Hiigsiga 2016-ka iyagoo qaadacay shir ka dhacay Muqdishu 29-ka illaa 30-ka July 2015-ka.
Machadka AJ wuxuu si gaar ah isha ugu hayni doonaa axwaasha siyaasada Jubba Land halka ay ku dambeyni doonto. Maamulada ka jira Soomaaliya waxaan ku boorinaynaa inay si wada jir ah u wada shaqeeyaan iyagoo fiirinaayo xalka guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Next post Maxay Tahay Sirta Ku Jirto Hoos U Dhigida Lacagta Shiinaha?
Previous post Waa Sidee Muuqaalkii Soomaalida Yemen?